मनोरन्जन: | लेकाली डट कम
कलिउडमा नायिकाहरुको सम्बन्धविच्छेद सामान्य
धेरैजसो चलचित्र नायिकाहरूले किन सम्बन्धविच्छेद गरेका होलान् – सायद विश्वप्रसिद्ध मनोविश्लेषक सिग्मन्ड प|mायडले यसको जवाफ एकै शब्दमा दिने थिए, यौन असन्तुष्टि । हरेक समस्याको पछिल्तिर यौन देख्ने प|mायडले त्यति भन्नु असामान्य पनि होइन । तर, प|mायड नै चकित हुने गरी नेपाली नायिकाहरूलेे पर्दाकै शैलीमा धमाधम सम्बन्धविच्छेद गररिहेका छन् ।र्
र्सवप्रथम विवाहिता नायिका रेखा थापालाई सोधौ“ । भन्छिन्, “ममा त्यस्तो समस्या छैन । ” अर्की नायिका अरुणिमा लम्साल भन्छिन्, “श्रीमान्कै सल्लाह र सहयोगमा चलेकी छु ।” सम्बन्धविच्छेदको आधिकारकि निर्ण्र्ााबजारमा आउनुअघिसम्म सबै जना रेखा र अरुणिमाकै जस्तो रेडिमेड जवाफ पस्कन्छन् । केही समयअघिसम्म नायिका सञ्चिता लर्ुइंटेलको जवाफ यस्तै हुन्थ्यो । अदालतमा सम्बन्धविच्छेदका लागि एकतर्फी निवेदन गरेपछि चाहि“ उनले भनिन्, “स“गै बस्न सक्ने अवस्था भएन । ”र्
भर्खरै थप तीन नायिका सञ्चिताकै जस्तो स्वतन्त्र बस्ने निर्ण्र्ााा पुगेका छन् । तिनीहरू हुन्, प्रिया रजिाल, सौजन्य सुब्बा र सुस्िमता कार्की । यी तीनै नायिकाले सानो पर्दाबाट परचिय बनाएका छन् भने प्रिया र सुस्िमता ठूलो पर्दाका चलचित्रमा पनि काम गररिहेका छन् ।
चलचित्रमा व्यस्त रह“दारह“दै जापान पुगेकी नायिका गौरी मल्ल सम्बन्धविच्छेदका लागि स्वदेश आइन् । अर्की नायिका पूजा चन्दले पति सुरजले कान्छी भित्र्याउने भएपछि त्यही बाटो लिइन् । चलचित्रकी नायिका सोनिया मल्ल नायक पति दिनेश शर्माले अर्की भित्र्याएपछि माइती देश भारत फर्किइन् । नायिका मौसमी मल्लले दोस्रा पति रवि डङ्गोललाई पनि छाडिसकेकी छन् । नेपाली बबि देवल अर्थात् सौरभ कार्कीस“ग विवाहबन्धनमा बा“धिएकी नायिका कविता खड्का पनि स्वतन्त्र भइसकेकी छन् ।
आधिकारकि रूपमा सम्बन्धविच्छेद नगरे पनि केही नायिका लामो समयदेखि पतिस“ग बस्दैनन् । यसरी भिन्न बस्ने नायिकामा करश्िमा मानन्धर -अमेरकिा) र बिना बुढाथोकी -जापान) छन् । करश्िमा पा“च वर्षेखि पति विनोदस“ग छैनन् भने विनाले निर्देशक पति रमेश बुढाथोकी र परविार छाडेको एक दशक भयो ।
विवाहितामध्ये धेरै नायिका सम्झौताको जीवन बा“चिरहेका भेटिन्छन् । यो पङ्क्तिमा नायिका जल शाह र सारङ्गा श्रेष्ठ पर्छन् । अमेरकिा बस्दै आएका जलका पति शरद रमिालले केही समयअघि नेपाल आएर यसको पुष्टि गरेका छन् । उनले भने, “हिरोइन बिहे गरेर म फसे“ ।” नेपाल-अमेरकिा ओहोरदोहोर गर्नेहरूका अनुसार, गोरो छाला भएको पुरुषस“ग विवाह गरेकी सारङ्गाको वैवाहिक जीवन सम्झौतामा अडिएको छ ।
एकातिर चलचित्रका नायिकाहरूको ठूलो सङ्ख्या सम्बन्धविच्छेद गरेर बसेको छ भने अर्कातिर बहुमत नायिका अविवाहिता छन् । ४० कटेकी नायिका मिथिला शर्माले अब अविवाहितै बस्ने निर्ण्र्ाागरेकी छन् । २५ कटेका धेरै नायिकाले विवाह गर्ने छा“ट देखाएका छैनन् ।
आखिर नायिकाहरूको जीवन समाजसम्मत किन छैन त – एक दर्जनभन्दा बढी चलचित्र निर्देशन गरसिकेका शोभित बस्नेतका अनुसार, हाम्रो सामाजिक मान्यतामा नायिकाहरू अटाउन सक्दैनन् । उनीहरू कति स्वतन्त्र हुन खोज्छन् भने परविार र समाजले कोरेको रेखा उनीहरूलाई पर्खाल बन्छ । सुनाउ“छन्, “हिरोइन पाल्नु भनेको हात्ती पाल्नुजस्तै हो ।”
शोभितको विश्लेषणमा धेरैजसो नायिकाको चरत्रि शङ्कास्पद छ । वाषिर्क पा“च लाखको आम्दानी नहुने नायिकाहरू २० हजारको मोबाइल सेट र १५ लाखको गाडी खरदि गर्छन् । थप्छन्, “आम्दानी देखि“दैन, खर्च धेरै छ ।”
त्यसो त कतिपय नायिकाहरूको दैनिक जीवनले शोभितको भनाइलाई पुष्टि गर्छ । आम्दानीभन्दा खर्च बढी देखिएपछि त्यसले गलत अर्थ जन्माउ“छ नै । नायिकाहरूले नै त्यस्ता कुरा स्वीकारेका छन् । कुनै बेला नायिका सारङ्गा श्रेष्ठले भनेकी थिइन्, “नायक भुवन केसी नभएको भए धेरै नायिका कुमारी नै रहन्थे ।” सारङ्गाको यस आरोपमा कति सत्यता छ, त्यो उनैले जानून् तर कतैबाट उनको खण्डन भएन ।
वर्षरकिा अखबार जम्मा गरेर हर्ेर्ने हो भने आमनायिकालाई चरत्रिमा बात लागेको छ । त्यसमा कुनै नायिकाले प्रतिवाद गरेनन् । उनीहरूको मौन स्वीकृतिले समाजमा पक्कै गलत सन्देश गएको छ । समाजशास्त्री ऋषिकेशव रेग्मीका अनुसार, हिरोइनहरूलाई आधुनिकताले बढी नै प्रभाव पारेको हुनाले पनि यस्तो परण्िााम आएको हुनसक्छ । भन्छन्, “समाजभन्दा उनीहरू बढी आधुनिक भए ।”
चा“डै पैसा कमाऔ“ र धनी बनौ“ भन्ने सपनाले पनि सम्बन्धविच्छेदमा प्रभाव पारेको समाजशास्त्रीको विश्लेषण छ । त्योभन्दा पनि खास गरेर विवाहअघिको यौन सर्म्पर्कले प्रभाव पारेको अड्कल गर्छन् रेग्मी । भन्छन्, “त्यस्तो सम्बन्ध विवाहपछिसम्म कायम रह“दा पनि समस्या परेको पाइन्छ ।”
पत्रकार बबिता बस्नेत ग्ल्यामर क्षेत्रका महिलाहरूले यस्तो आरोप बढी नै खेप्नुपरेको बताउ“छिन् । भन्छिन्, “महिलाको र्सार्वजनिक व्यक्तित्वलाई औ“ला ठड्याउने काम आजदेखि भएको होइन ।”
नायिकाहरूको यस प्रकारको वैवाहिक जीवनले नया“ मान्छेलाई यस क्ष्ँेत्रमा प्रवेश गर्न पक्कै पनि असर पारेको छ । सञ्चारमाध्यमले र्सार्वजनिक गरेका नायिकाका समस्यालाई जसरी बुझे पनि आममान्छेमा कलाकार बन्ने मोह रहेको पाइ“दैन । कला क्षेत्रमा दाम कम, बदनाम बढी भएको निष्कर्षनिकाल्दै नायिका कृति भट्टर्राईले चलचित्र क्ष्ँेत्र छाडेको यथार्थले पनि शङ्का जन्माएकै छ । भर्खरै सम्बन्धविच्छेद झेलेका चलचित्र लेखक विकास आचार्यका अनुसार, नायिकाहरू हतारमा बिहे गर्छन् र फर्ुसदमा पछुताउ“छन् । भन्छन्, “आफ्नो करअिरको बढोत्तरीस“गै उनीहरूले लोग्नेलाई सानो देख्न थाल्छन् र स्वतन्त्र हुन रुचाउ“छन् ।”
This entry was posted on March 31, 2008, in मनोरन्जन:.	Leaveacomment
हाफ प्यान्ट, स्लिभलेस -बाहुला नभएको) टिर्सट अनि टाउकोमा कालो चस्मा । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले तापक्रम बढेको जनाउ दिइरह“दा राजधानीको मुख्य चहलपहलको केन्द्र न्युरोडमा यस्तो पहिरनमा थुप्र्रै युवतीहरू देखिन थालेका छन् । दिउ“सोको चर्को घामस“गै छोटा, पातला अनि पारदर्शीर् कपडामा उनीहरूलाई आइसक्रिम वा चिसो पेय पिउ“दै गरेको भेटिन्छ ।
लाजिम्पाटकी रयिा, १९, लाई गर्मी मौसम असाध्यै मन पर्छ । भन्छिन्, “जाडोका दिनहरू दिक्कलाग्दा हुन्छन्, कहिल्यै नआइदिए हुन्थ्यो । मनपरेका र फेसनका कपडा लगाउन पाइने भएकाले गर्मी रमाइलो लाग्छ ।” फिता बा“ध्ने टप र एकदमै छोटो स्कट लगाएकी रयिाले कपालमा कालो चस्मा सिउरएिकी थिइन् ।
तिमीलाई देख्दा यो मनमा होसै हु“दैन…..राजेशपायल र्राईको गीतमा मोडलिङ् गरसिकेकी सिर्जना सुब्बालाई पनि गर्मी मौसम मनपर्छ । किनभने, उनी मनपरेको पहिरन मज्जाले लगाउन पाउ“छिन् । प्रायः वन पिस जामा लगाएर हि“ड्छिन् । जामा नलगाएको दिन स्कट छुटाउ“दिनन् । भन्छिन्, “र्फमल बन्नुपर्दा भने स्लिभलेस कर्ुता लगाउ“छु । तर, सबैभन्दा मन पर्नेचाहि“ वन पिस जामा हो ।”
कान्तिपुर सिटी कलेजकी गायत्री तिवारी र यनी लोहनीमा पनि गर्मीका पातला र छोटा कपडाकै आकर्षा छ । गायत्री स्कट र स्लिभलेस टिर्सट र यनी क्वार्टर प्यान्ट अनि पातलो र खुला टप लगाउन मन पराउ“छिन् । सहरमा जाडोभन्दा गर्मी मन पराउने सुन्दरीहरू थुप्रै भेटिन्छन् । गर्मी याममा सहरयिा युवतीहरूको लवाइखवाइमा निकै परविर्तन आउ“दैछ । उनीहरूको जीवनशैली निरन्तर बदलि“दो छ । कतिपय युवतीहरूमा छोटा र पारदर्शी कपडा लगाउने प्रतिस्पर्धा नै चलेजस्तो लाग्छ । संवेदनशील अङ्गहरू र्छलङ्ग देखिने फेसन हर्ेने भीडसमेत देखिन्छ ।
ऋतु परविर्तनस“गै गर्मी उखरमाउलो हु“दैछ । गत वर्षचैत ५ गते अधिकतम तापक्रम २३ देखि २५ ड्रि्री सेल्सियस थियो भने यस वर्षचैत ५ गते अधिकतम २४ देखि २६ छ । अघिल्लो वर्षो तुलनामा यस वर्षगर्मी चा“डै छिप्पिएको अनुभव भएको छ । यस्तो अवस्थामा बाक्लो कपडा लगाउन मन नलाग्नु अस्वाभाविक होइन ।
न्युरोडमा अधिकांश पसलमा रसिल्क, कटन, सिल्क, चिकन, जर्जट, क्रेभसिल्क र सिफनका कपडाहरू पाउन सुरु भइसकेको छ । गर्मीका कारण बजारमा ती जातका कर्ुता, टप, कर्ुर्ती, स्कट, वन पिस जामा सिलाउन भ्याइनभ्याई छ । स्थानीय व्यापारीहरूका अनुसार, उपत्यकामा रहेका २० गार्मेन्टबाट गर्मीका लागि भनेर कटनका हल्का रङका कपडाहरू टफ कर्ुर्ती र लङ् स्कटहरू बजारमा आएका छन् । तर, आयातित कपडा भने गत वर्षन्दा कम छन् ।
शीतल रङका कपडा राम्रो हुने अनुभव छ कान्तिपुर एफएमकी आरजे सविना कार्कीको । भन्छिन्, “गर्मी मौसम नै फेसनका उपयुक्त समय हो । तर, यसमा सबैभन्दा राम्रो रङचाहि“ सेतो हो ।” सविनालाई क्वार्टर पाइन्ट र स्लिभलेस भेस्ट मनपर्छ । तर, फेसनका नाममा अर्धनग्न भएर हि“ड्नुलाई चाहि“ उनी राम्रो मान्दिनन् ।
गर्मीमा युवतीहरूले बढी मन पराउने वस्त्रहरूमा मिनी स्कट, स्लिभलेस भेस्ट-टप, कर्ुर्ती, क्वार्टर प्यान्ट, हाफ प्यान्टलगायत हुन् । हल्का रङका विशेष गरेर सेतो, गुलाबी, फिक्का नीलो, हल्का पहे“लो, खैरो छन् । हल्का रङका कपडाले घामका किरण कम सोस्ने ह“ुदा गर्मी नहुने भएकाले यस्ता कपडाको माग बढेको हो ।
गर्मी समयमा कस्तो कपडा राम्रो हुन्छ त – नेपाल मेडिकल कलेजका प्राध्यापक डाक्टर अनिलकुमार झा भन्छन्, “जसरी हाम्रो शरीरलाई छालाले ढाकेको हुन्छ, त्यसरी नै छालालाई कपडाको कभर चाहिन्छ । कुनै पनि छालासम्बन्धी रोगबाट बच्नका लागि कटनको कपडा राम्रो हो ।”
झाको भनँइमा जस्तो पायो त्यस्तो कपडाले पसिना गुम्सि“दा समस्या आउ“छ । कटनको कपडा लगाउ“दा खटिरा, डन्डिफोर आदिबाट बच्न सकिन्छ । अझ छोटो कपडा लगाएर हि“ड्ने हो भने घामबाट बिमिरा, खटिरा, चाया, पोतो, मखियाजस्ता छालासम्बन्धी समस्या देखा पर्न सक्छन् ।
समाजशास्त्रीहरूचाहि“ पेन्टी र ब्रा नै देखिने खालको पारदर्शी कपडा लगाउनुलाई विभिन्न पत्रपत्रिका र टेलिभिजन च्यानलको देखासिकी मान्छन् । समाजशास्त्री कृष्ण भट्टचन भन्छन्, “सम्भ्रान्त र सहरयिाले पोसाकमा ध्यान दि“दा चारैतिर यसको प्रभाव परेको हो । गरबिका लागि के गर्मी, के जाडो – तिनलाई एकसरो लगाउन पनि रहर छ ।”
गर्मी चढ्दै जा“दा कतै धुमधामको व्यापार छ त कतै कपडा नभएर व्यापार छैन । जस्तो बागबजारमा सात वर्षेखि फेन्सी स्टोर चलाउ“दै आएका इमरानले अघिल्लो वर्षो अनुपातमा ५० प्रतिशत पनि व्यापार गर्न सकेका छैनन् । भन्छन्, “के गर्नु कहिले तर्राई बन्द त कहिले चीनको आफ्नै समस्याले गर्दा सामान ल्याउन पाइएको छैन ।”
यस्तै दुःखेसो पोख्छन् अर्का व्यापारी मञ्जुर अन्सारी । बागबजारमा सापिया बुटिक चलाउ“दै आएका अन्सारी महिलाहरूको फेसनका कपडा सिलाउ“छन् । भन्छन्, “अहिले गर्मी भएकाले कटन, रसिल्क, जरजेट, सिफनका कपडा बढी मन पराउ“छन् । तर, संविधानसभा लागेकाले व्यापार नै छैन । चुनावपछि चाहि“ पक्कै हुन्छ ।”
गर्मी चढिसक्दा पनि बजारले अझै ‘समर ड्रेस’ पाउन सकेको छैन । हङ्कङ्, साङ्र्घाई, ब्याङ्कक, दिल्लीलगायतका सहरहरूबाट नेपालमा कपडा आउ“छन् । तर, यसवर्षगर्मीका कपडा हालसम्म पनि कतैबाट आउन नसकेको काठमाडा“ै मलमा पसल चलाउ“दै आएकी डायना मास्के बताउ“छिन् । व्यापारीहरूका अनुसार कपडा नआउनुको मूल कारण अस्थिरता हो । बन्द, आगजनी, लुटजस्ता घटनाका कारण व्यापार-व्यवसायमा समस्या पर्दै आएको छ ।
This entry was posted on March 27, 2008, in मनोरन्जन:.	Leaveacomment
नक्कलले निम्त्याएको विकृती
भनिन्छ एक वेश्याले एक दिनमा एकजनालाई बिगार्ने सम्भावना रहन्छ भने एक चलचित्र नायिकाको अंगप्रदर्शनले एकै समयमा सयजनाको मती भ्रष्ट बनाइदिन्छ। राणाकालपछि केटीहरुको लवाइमा आएको परिवर्तनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमय समयमा आएर उग्र रुप लिन थालेको छ। पुस–माघको जाडो याममा समेत अर्धनग्न शरीर देखाउने प्रवृत्तिले व्यापक रुप लिन थालेको छ। हालै अर्धनग्न छाती देखाउँदै कामुक शैलीमा बिहेपार्टीमा आएका एक युवतीलाई अर्का एक युवकले रक्सीको मातमा फिल्मी शैलीमा चुम्बन लिँदै जिस्किन थालेपछि पार्टीमा केहीबेर स्तब्धता छायो। यस्ता दृश्य काठमाडौं र शहरी इलाकामा सामान्य भइसकेको छ। अनि शहरी युवतीहरुलाई पनि अर्धनग्न शरीर देखाउनु महिला अधिकारसरह नै भइसकेको छ।
उनीहरुका लागि यो सामान्य होला तर यसले युवा जमातलाई खास गरी किशोरहरुलाई धेरै असर पारिरहेको छ। यौनसम्बन्धी चासो र अभिरुचि हुने उमेरका किशोरहरुलाई यस्ता खुला दृश्यले यौन उत्तेजना उत्पन्न गराउने र सोही कारण विभिन्न दुर्घटना हुने गरेको पाइएको छ। घरघरमा आउने टेलिभिजनका च्यानलमा र चलचित्रका पर्दामा देखिने नायिकाहरुका लवाइको नक्कल गर्नु स्वाभाविक हो। समयअनुसार लवाइमा आएको परिवर्तन पनि सामान्य नै हो। तर यही लवाइका कारण युवतीहरु समाजमा असुरक्षित हुँदै गएका छन्।
चलचित्रमा देखाइने फेसनको नक्कलप्रति अक्कल नलगाउनेहरु मात्र असुरक्षित नभई सोझा युवतीसमेत खतरामा पर्न थालेका छन्। चलचित्र र म्युजिक भिडियोहरुमा देखाइने नायिका र मोडलहरुको यौन उत्तेजक दृश्यका कारण एकातर्फबलात्कार बढेको त छ नै, साथमा वेश्यावृत्तिले समेत बढावा पाएको एक र्सर्वेक्षणले देखाएको छ।
सस्तो लोकप्रियताका नाममा कथाले मागेको अंग प्रदर्शन गर्ने नायिका र मोडलहरुका कारण नै समाजमा विकृति र विसंगति सजिलैसँग भित्रिरहेको छ। भनिन्छ एक वेश्याले एक दिनमा एकजनालाई बिगार्ने सम्भावना रहन्छ भने एक चलचित्र नायिकाको अंग प्रदर्शनले एकै समयमा सय जनाको मती भ्रष्ट बनाइदिन्छ। यस हिसाबले चलचित्रका नायिका र मोडलहरुका कारण युवा जमातमा विकृत्ति भित्रिएको छ। एक मनोवैज्ञानिकका अनुसार समाजमा वेश्यावृत्ति र बलात्कार बढ्नुको प्रमुख कारकतत्व नै नायिका र मोडलहरुको अंग प्रदर्शन हो। अंग प्रदर्शनका कारण अधिकांश युवामा अस्वाभाविक रुपमा यौन उत्तेजना उत्पन्न हुन जान्छ। पश्चिमेली समाजमा जस्तै यौनमा स्वतन्त्रता भएको भए हाम्रो समाजलाई यसले खासै असर पर्दैनथ्यो तर पूर्वीय संस्कृतियुक्त हाम्रो समाजमा यसले समाज बिगारिरहेको छ, संस्कृति नष्ट गरिरहेको छ र गैरकानुनी कार्यलाई बढावा दिइरहेको छ।
चलचित्र र भिडियो म्युजिकहरुमा हुने अंग प्रदर्शनको असर किशोरहरुलाई परेपनि शिकार किशोरी तथा युवतीहरु भइरहेका छन्। कलेज र प्लस टु पढ्ने किशोरहरुको चर्चाको विषय नायिकाहरुको अंग हुने गर्दछ। फलानाको नितम्ब, तिघ्रा, छाती क्या सेक्सी छ यार। त्यसपछि गर्लफ्रेन्ड हुनेले आफ्ना प्रेमिकालाई ललाइफकाइ वा विभिन्न मानसिक दबाब दिँदै शिकार बनाउने गरेको पाइएको छ। थापाथलीस्थित प्रसूतिगृह, ओम नर्सिङ अस्पताल, नेपाल परिवार नियोजन संघलगायतका विभिन्न मेडिकल सेन्टरका क्वाय्क सेन्टर
–तीन महिनाको गर्भ पतन गराउने वैधानिक स्थल) मा निन्याउरो मुख लगाएर फर्कने युवतीहरुबाट यसको पुष्टि हुन्छ। ती निकायहरुको तथ्यांकअनुसार गर्भपतन गराउने १६ देखि २४ वर्षसम्मका अविवाहित युवतीहरु ९० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका छन्।
नेपालजस्तो बह्मचर्य र कुमारीपनको संस्कृति भएको देशमा अंग प्रदर्शन र अश्लील दृश्यका कारण साँघुरा गल्ली र जंगलमा यत्रतत्र कण्डम फालिएका भेटिनुले समाजलाई लज्जित तुल्याएको छ। अझ कलेज र विद्यालयका नजिकका पसलहरुमा परिवार नियोजनका साधनको अपत्यारिलो बिक्रीले हाम्रो समाज कतातिर डोरिएको छ भन्ने देखाउँदछ।
नेपाल प्रहरी अपराध महाशाखाले पनि बलात्कारको प्रमुख कारकतत्व अंग प्रदर्शन रहेको निक्र्योल निकालेको छ। केटी जिस्क्याउने, असुरक्षित गर्भपतन गराउने, बलात्कार र वेश्यावृत्ति घटाउन आम सञ्चारका माध्यममा अंग प्रदर्शन हुने दृश्य राख्न नहुने धारणा मनोवैज्ञानिक नन्दिता शर्माको छ। तर जनतालाई सचेत बनाउने र राम्रो काम गराउन अभिप्रेरित गराउनुपर्ने आमसञ्चारका माध्यमले नै मनोरञ्जनका नाममा युवतीलाई साधन बनाउँदै उनीहरुलाई नै अप्रत्यक्ष रुपमा असर पार्ने अनि समाज बिगार्ने तथा वस्तुको रुपमा प्रयोग गर्दै शोषण गरिरहेको छ।
यससम्बन्धमा आफूलाई सेक्सी देखाउने प्रयासमा रहेकी अश्लीलताकी पोख्त नायिका रेखा थापा भन्छिन्– आमाले दूध खुवाएको दृश्य तथा छोटा र्स्कर्ट लगाउनु र अर्धनग्न छाती देखाउनु अश्लीलता होइन। कथाले मागेमा छोप्नुपर्ने अंग जति मात्र छोप्न पनि तयार छु।
पूरै नांगो देखाएमा अश्लीलता र यौन कामुकता आउँदैन। त्यसैले गोप्य अंग देखिएलाजस्तो दृश्य देखाउनुपर्छ, अनि मात्र दृश्यमा मजा आउँछ –एक निर्माताले भनेका थिए। १२ वर्षअहिलेसम्म सपरिवार ब्ल्याकमा टिकेट किनेर भए पनि चलचित्र भवन पुग्ने काठमाडौं मैतीदेवीका नारायणप्रधानको परिवार अहिले चलचित्रमा हुने अश्लील दृश्य र अंग प्रदर्शनकै कारण हल पस्न हिच्किचाउँछन्।
चलचित्रमा मात्र होइन विदेशी संगीतको नक्कल गरेर बनाइएका नेपाली पप गीतहरुमा पनि युवतीलाई ग्लेमर दृश्यको नाममा शोषण गरेर युवाहरुको मनमस्तिष्कमा नराम्रो असर पुर्‍याइएको छ। यसको नियन्त्रण कसले गर्ने हो जवाफ अनुत्तरित छ। अनलाइन र इन्टरनेटका लागि सेक्सी र कामुक पोज दिँदै मोडलहरुले पनि अप्रत्यक्ष रुपमा समाजमा अपराध फैलाइरहेका छन्।
चलचित्रमा नायिकाले गर्ने अंग प्रदर्शन र मोडलहरुको अश्लीलताका कारण अब तीन हात लाग्ने चोलीको सट्टा १ हातले भ्याउने ब्लाउज लगाए पुग्ने भएको छ। विवाहित पुरुषलाई र महिलालाई अंग प्रदर्शनको प्रभाव कमै परेपनि समग्रमा सबैलाई धेरै पर्ने गर्दछ। यसले कामतृष्णा जगाउँछ। कामुकताको अन्धवेगमा कामुक व्यक्ति अन्धो हुन्छ। अन्धो व्यक्तिले सही मार्ग देख्दैन। यसले शहरी भेगमा गर्भपतन गरेर वा नियोजन गरेर समाधान गर्ला तर यसको पहुँच नभएको क्षेत्रमा के गर्ने ?
विभिन्न साइटहरुका लागि मोडलहरुले निर्धक्कताका साथ अंग प्रदर्शन गर्दै कामुक र उत्तेजक फोटो राख्न दिएका कारण कामतृष्णा जगाउँछ। अनुत्तरदायी नायिका र मोडलहरुका कारण समाज कतातिर डोरिन्छ भन्न सकिँदैन।
युवतीहरुको शक्ति चलचित्रका नायिकाको र मोडलहरुको नक्कल गर्नमा खर्चिन थालेको छ। जसले गर्दा युवकयुवतीहरुको ध्यान कामतृष्णा मेटाउने विविध तरिकाको खोजी गर्नमा व्यतीत भएको छ। सौन्दर्यता, व्यक्तिगत अधिकार र कथाले मागेको भरमा युवा पुस्तालाई गैरजिम्मेवार बनाउने अनि विभिन्न यौन रोग सर्ने क्रियाकलापतर्फ उन्मुख गराउने भूमिकाबाट बच्न सके नेपाली कलाकारले समाजमा आफ्नो छवि स्वच्छ पार्न सक्ने छन्। – पूर्णभक्त दुवाल
India Vs Pakistan – 3rd ODI – MMS LINK
FREE LIVE CRICKET BY spacenepal.com! *DIWALI SPECIAL*
WATCH ON INTERET EXPLORER ONLY
Stream provided by spacenepal.com
This isalimited stream, meaning onlyalimited people can watch it, so dont waste time and watch it as soon as possible!
STREAM WILL BE GOING DOWN EVERY HOUR, SO WHEN THE STREAM GOES DOWN, REFRESH THE PAGE A COUPLE OF TIMES AND IT WILL WORK AGAIN
This entry was posted on November 11, 2007, in मनोरन्जन:.	Leaveacomment
बेल्जियमको ओस्ट्न्डेमा आयोजना गरिएको दशैको केही भिडियोहरु 6
यहाँ राखिएका सबै भिडियोहरु स्पेसनेपालडट्कम् सँग सम्बन्धित छ!
This entry was posted on November 7, 2007, in मनोरन्जन:.	Leaveacomment
बेल्जियमको ओस्ट्न्डेमा आयोजना गरिएको दशैको केही भिडियोहरु5
This entry was posted on November 6, 2007, in मनोरन्जन:.	Leaveacomment
बेल्जियमको ओस्ट्न्डेमा आयोजना गरिएको दशैको केही भिडियोहरु 4